Iqela labagculeli lisongela uApple ngokupapasha izicwangciso zeMacBook | Ndisuka mac
Iqela lemigulukudu lisongela uApple ngokupapasha izicwangciso zeMacBook
UToni Cortes | | Ezahlukeneyo
Ngelixa sonke besonwabile izolo ukubona iindaba zokuba iApple isibonisa yona «Intwasahlobo ilayishiwe«, Kwiintlanganiso zeCupertino zabanjwa kumcimbi ombhoxo ongahambelani kwaphela nomxholo ophambili.
Kubonakala ngathi iqela lezigebenga lingene kwiiseva ze Ikhompyuter yeQuanta, umenzi waseTaiwan wezinto zeApple, kwaye ufumene imizobo yeNdibano yeMacBook kunye neMacBook Pro Ngoku ibhendi ifuna imali, kodwa isoyikisa ukupapasha ezi zicwangciso. Yintoni ilaphu.
Njengoko ipapashiweyo nje Ingxelo, kwabizwa iqela labagculeli Bubi ufumene izicwangciso zokwakha izixhobo ezininzi zeApple kwaye woyikisa ukuzenza zibe sesidlangalaleni ukuba abafumani mali. I-blackmail yobomi bonke, yiza.
Ezi zicwangciso zibonakala ngathi zifunyenwe emva kohlaselo lweeseva zeQuanta Computer, inkampani yaseTaiwan esebenza njengenye yeefektri eziphambili zeApple. Kwiforum kwifom IWebhu eNzuluIqela le-REvil libanga ukuba lifumene imizobo eyahlukeneyo yobunjineli yezixhobo ze-Apple ezinje ngeMacBooks kunye neApple Watch, ezisetyenziswa yiQuanta Computer ukudibanisa ezo mveliso
Hackers bazama uku ukuphanga Inkampani yaseTaiwan ukuba ingabelani ngeefayile, kodwa uthethathethwano aluphumelelanga. Ngoku, basoyikisa iApple ngokuthe ngqo, becela inkampani esekwe eCupertino ukuba ihlawule isixa semali ngaphambi kokuba iipropathi zebiwe zithunyelwe kwiWebhu enzulu.
Izigidi ezingama-50 zeedola
Njengoko ingxelo ichaza, i-REvil gang yabuza uQuanta 50 iidola ezigidi. Ayaziwa ngoku ukuba babuze malini iApple. Ukungqina ukuba baneefayile zangaphakathi ezifunyenwe kukuvuza kweQuanta, iqela liye laveza iifoto-skrini ezininzi zeefayile, zityhila iinkcukacha zendibano zeMacBook Air kunye neMacBook Pro.
Iqela lethu lixoxa ngokuthengisa izixa ezikhulu eziyimizobo eyimfihlo kunye neegigabytes zedatha yobuqu eneempawu ezininzi eziphambili. Sicebisa ukuba iApple ithenge idatha enjalo kwakhona ngaphambi kuka-Meyi 1.
Nangona idatha iyimfihlo, izikimu zobunjineli ezifunyenwe liqela le-Revil hacker azibonakali ziveza nantoni na ebalulekileyo ngezixhobo ekuthethwa ngazo. U-Apple ubhengeze ukuba "uyaphanda ngesi sehlo" kwaye akanazo ezinye iinkcukacha zokubeka izimvo ngeli xesha.
Eli qela linye lizamile ukufumana imali kwezinye iinkampani ngaphambili, ezinje ngomenzi weelaptop Acer, kwizenzo ezifanayo. Inyani yile yokuba ukuba eminye imizobo yendibano ipapashiwe, ayisiyiyo ukuba ibaluleke kakhulu. Ngokuthatha isixhobo kwaye ubone ukuba sakhiwe njani, unokufumana umbono ocacileyo wokuba zingamela ntoni na ezi zicwangciso. Abafana abakwi-iFixit banokuzizobela bona ngaphandle kwengxaki enkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Iqela lemigulukudu lisongela uApple ngokupapasha izicwangciso zeMacBook
I-AirTag elahlekileyo inokufumaneka nokuba usebenzisa i-Android
I-watchOS 7.4 yongeza umsebenzi we-ECG we-Apple Watch e-Australia nase-Vietnam